कोरोनाबाट विदेशमा २४३ जना नेपालीको मृत्यु ! « MNTVONLINE.COM
कोरोनाबाट विदेशमा २४३ जना नेपालीको मृत्यु !
काठमाडौँ । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट शनिबार साँझसम्म नेपालबाहिर विभिन्न १६ मुलुकमा मृत्यु भएका नेपालीको सङ्ख्या २४३ पुगेको छ । यो साता मात्रै थप ४३ नेपालीको निधन भएको पुष्टि भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाले बताए ।